मन्त्री प्रेम आले विरुद्ध एक्सन लिने आनन्द बतासको घोषणा ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारमन्त्री प्रेम आले विरुद्ध एक्सन लिने आनन्द बतासको घोषणा !
मन्त्री प्रेम आले विरुद्ध एक्सन लिने आनन्द बतासको घोषणा !
नारायणहिटी दरबार संग्राहलयमा रेस्टुरेन्ट बनाएर विवादीत भएको बतास अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्द बतासले संस्कृती , पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री प्रेम आले वि’रुद्ध एक्सन लिने घोषणा गरेका छन् ।
आफुले सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर गरिरहेको कामलाई मन्त्री आलेले हस्तक्षेप गरेर भ’त्काएको भन्दै बतासले आक्रोस पोखेका छन् । बतासले मन्त्री आलेको निर्देशनमा भएका सम्पुर्ण कामहरु गैर कानुनी रहेको दाबी गर्दै आफु चुप लागेर नबस्ने बताएका छन् ।
बतास समूहले गरेका एक पछि अर्को कामहरु विवादीत बनिरहेको बेलामा एक टेलिभिजनलााई अन्तर्वार्ता दिँदै बतासले नारायणहिटी दरबार संग्रालय बनाउँन आफ्नो कम्पनीले ठेक्का पाएको बेलामा प्रेम आले पनि मन्त्री रहेको बताएका छन् । एक बर्ष अघि बनाउँन दिने अनी अहिले मौखिक आदेशमा बन्द गराउँन मिल्छ ? बतासले प्रश्न गरेका छन् ।
मन्त्रीको मौखिक निर्देशन भन्दै चलिरहेको काम रोक्न लगाउँने र बनिरहेको संरचना भत्काउँने अधिकार कसैलाई पनि नभएको जिकिर पनि बतासले गरेका छन् । के यो देशमा कुनै नियम कानुन छैन ? मिडियामा आएको समाचारका आधारमा भन्दै मन्त्रीको मौखिक आदेश भनेर यस्तो काम गर्न पाइन्छ ? उनले प्रश्न गरेका छन् ।
बतासले मन्त्री प्रेम आलेको निर्णय वि’रुद्ध अदालत जाने संकेत पनि गरेका छन् । कुकुरले टोक्यो भन्दैमा कुकुरलाई टोक्ने आफ्नो स्वभाव नभएको भन्दै उनले मन्त्री आलेको निर्णय वि’रुद्ध न्या’यको ढोकामा जाने बताएका छन् । बतासले आफुले नेपाल सरकारको सम्मुर्ण नियम पुरा गरेर नै नारायणहिटीमा रेस्टुरेण्ट खुलाएको दा’बी गरेका छन् ।
मन्त्री आलले मौ’खिक निर्णय गरेर निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएको भोलिपल्ट भाडा भने सरकारले तिराएको उनले बताएका छन् । भोलीपल्ट भडा तिर्न भनियो हामीले तिरेका छौँ पर्सी पल्ट बनिरहेको संरचना भत्कायो जबकी सम्झौतामा निर्माण अवधीभर भाडा लिन पाइन्न भन्ने छ । बतासले भनेका छन् ।
बतासले आफु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निकट भएको भन्ने कुरा भने स्विकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आफुलाई नजिक बाट चिन्ने र आफुले पनि देउवालाई चिन्ने पनि उनले बताएका छन । उनले पाखेरा बाट नियाँलोको टुसा ल्याएर देउवा ओली लगायतका शीर्ष नेतालाई खुवाउँने गरेको कुरा भने स्विकार गरेका छन् ।